जाडो म’हिनामा बढि शारीरिक सम्पर्क गर्न मन लाग्छ के गर्ने होला ? - ramechhapkhabar.com – ramechhapkhabar.com
जाडो म’हिनामा बढि शारीरिक सम्पर्क गर्न मन लाग्छ के गर्ने होला ?
प्राय जसो बिहे पछी महिलाहरुको शारीरिक परिवर्तन हुनु स्वाभाविक नै मानिन्छ । विशेष गरि बिहे पछि महिलाको जिन्दगीमा धेरै परिवर्तन आउँछ । उनीहरुको बोली चाली देखि हरेक कुरामा परिवर्तन देख सकिन्छ ।साथै बिवाह पछी महिलाहरुको शरीरमा पनि परिवर्तन देखिन्छ । सामान्य तय अन्य महिलाको तुलनामा विवाहित महिलाको हि ञपको आकारमा धेरै परीवर्त भएको देख्न सकिन्छ ।
हाम्रो देशमा सामान्यतय महिलाहरु सानै उमेरमा शारीरिक विकास नभएकै बेला बिवाह गर्छन त्यस कारणपनि बिहेपछी हिपको साइज बढ्नु अथवा ठुलो हुनु सामान्य मानिन्छ ।।अमेरिकामा एक सोधकर्ताहरुले भने भिन्नै तथ्य पत्ता लगाएका छन् । हिपको आकार ठुलो भएका महिलाहरुलाई ग र्भ वती हुदा खासै समस्या नहुने समेत एक अनुसन्धानले बताइएको थियो । बिहे पछि महिलाहरु किन धेरै मोटाउछन् ।
किन यति धेरै प रिवर्तन आउँछन् । यस्ता छन् कारणहरु अ निन्द्रा बिहेपछि धेरैजसो महिलाहरूको सुत्ने समय र दैनिकी बद्लिन्छ । थपिएको जिम्वेबारी बहन गर्दा गर्दै सुत्नको लागि पर्याप्त समयको अभावमा धेरैपटक अनिदो बस्नु पर्ने हुनसक्छ । कम्तिमा ७ घण्टा नसुत्नुको कारणले महिलाहरूको तौल बढ्ने गर्दछ ।
जस कारण शरिरमा भएको बोसोको घट्ने प्रकिया कम हुन्छ र तौल बढ्छ । सामाजिक दबाब कम हुनु महिलाको लागि बिहे अघि राम्रो देखिन तथा राम्रो पती पाउनका लागि आफ्नो शरिरको फिटनेसलाई विशेष ध्यान दिएका हुन्छन् तर बिहे पछि यो दबाब कम हुन्छ , जसकारण महिलाहरु आफ्नो फिटनेसमा ध्यान दिदैनन् र तौल बढ्न जान्छ ।।
काठमाडौं । एउटा घरमा बाबा र ११ बर्षिय छोरी बस्ने गर्थे । एक दिन...
म त युवा थिएँ, कोरोनालाई जितेँः वुहानमा मेडिकल पढेकी एक विद्यार्थी
काठमाडौं । सबैभन्दा पहिले त उनको परिवारले चीनमा मेडिकल पढ्न पठाउने वा नपठाउने भन्नेमा...
काठमाडौँ , २७ पुस । अमेरिकाको टेक्सासमा भएको दु’र्घटनामा एक नेपली महिलाको मृ’त्यु भएको...
२४ वर्षदेखि सलमानको सुरक्षामा शेरा,कारण भने यस्तो
एजेन्सी। बलिउड अभिनेता सलमान खानले आफ्ना बडीगार्ड शेरासँगको एक तस्वीर सामाजिक सन्जालमा राखेका छन्...
बाइडेन फेरि जारी गरे कार्यकारी आदेश, अमेरिका जानेहरुका लागि
सलमान खानको बोलीले बलिउडमा हलचल,
सेल्सम्यानका छोरा बाइडेन कसरी बने विश्वकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति ?
राष्ट्रपतिका रूपमा कति हुन्छ बाइडनको तलब ?